ဘယ်သူ့အကြောင်းလဲ သိချင် ဖတ်ကြည့်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘယ်သူ့အကြောင်းလဲ သိချင် ဖတ်ကြည့်ပါ
ဘယ်သူ့အကြောင်းလဲ သိချင် ဖတ်ကြည့်ပါ
Posted by manawphyulay on Jan 29, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary, Short Story | 39 comments
ကျွန်မကိုသူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်တယ် ………… မနော
ကျွန်မကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက………… လောလောဆယ် ဖေရယ်မေရယ် မောင်နှမတွေရယ် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရယ်… ရယ်….
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု………… နတ်လူသတ္တ၀ါအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်စုံကြပြီး အေးချမ်းမှုအပေါင်း ရရှိနိုင်ကြပါစေ…
ချစ်သူဆိုတာ………… ဒါကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့။ မဖြေတတ်ဘူးရှင့်။
လောကကြီးမှာ ကိုယ်က နေတတ်ရင် ပျော်ရပါတယ်။
ရွာ ထဲမှာ သူများတွေ စွံ တာကြည့်ပြီး အားမလို အားမရနဲ့ profile တွေ ဖွင့်ချကုန်ပြီ
အိုင်စီအသဲစွဲ၊ အဲဒီထဲကမှ အငဲ၊ လေးဖြူရဲ့ မမေ့နိုင်သီချင်းပိုနှစ်သက်၊ မျိုးကျော့မြိုင်အသံစာသားကြိုက်၊ ရင်ဂို၊ ဖိုးကာ၊ လွှမ်းမိုး၊ အနိုင်တချို့စာသားကြိုက်၊
ဒါဆို ၃၀ + – အသက်
ဘဘကြယ်နော် သူ့လိုများ အောင်းမေ့နေလား………….. ဘာရေးရမှန်းမသိသေးလို့ ရေးမိတာကိုများ….. လာဖတ်ပြီးတော့ တူများကို နိုလိုက်မှာနော်…..
စမော စတား နော် ဟွမ်း…
တူညား အပျိုကြီး လုပ်ပါမယ် ချိုမှ.. ဟွင့်..
ဒါဗြဲ.. လမ်းတွေ့ရင် မနှုတ်ဆက်တော့ဘူး။
မနှုတ်ဆက်တော့ဘူး) မလုပ်ပါနဲ့ နှုတ်မဆက်တော့ဘူးလို့ ပြောပါ ချူးမရဲ့ အကုန်လိုက်ပြောနေရတာပဲ
30စွန်းရုံလောက်ပဲ ရှိသေးတာ ကို အားမလျော့နဲ့ တိရား မနောရေ ……………
ဆူးက၃၀ စွန်းလို့လား ကိုဂျပန်အလံရ သူက ဟို အမေရိကန်မှာ နွားတင်းဂုတ်ကိုလေယဉ်ဝင်ပြီးခလုတ်တိုက်တုံးကမှ ၁၀ တန်းဖြေပြီးစရှိသေးတာ။…..
သူကလည်းမခွဲချင်ဖူး ခွဲရင်လည်း ၅၀=၅၀
ဂျကား မပီ ဆို အခုမှ ခယေးဘဲ ချိသေးတာကိုး….
အပေါ်ကပို့စ်မှာ တစ်ခုမှားနေပါတယ်။ ၀င့်ပြုံးမြင့်(ဂျာမန်ဘာသာပြန်)လို့ ရေးထားတာပါ။ ၀င့်ပြုံးမြင့်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပါ။ ဘာသာပြန်ပုံ ထူးခြားတယ်။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး စာရေးဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ခုရက်ပိုင်းလေးတင် သူ့စာအုပ်ကြော်ငြာ သတင်းစာထဲမှာပါလာတယ်။ ၂၂ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာထဲမှာပါ။ စာအုပ်က တကယ့်အကျော်အမော်စာအုပ်။ A Thousand Splendid Suns ပါ။ စာအုပ်ကို အမြန်ဖတ်ချင်နေပေမယ့် ခုထိ ရန်ကုန် မတက်နိုင်သေးတာကလည်း ဒုက္ခတစ်မျိုး။
မနောရယ် ဒီလောက်ကို စိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူကများ
ဒီခေတ်တော့ …မိန်းမလည်း အရည်အချင်းရှိရင်.. ခေါင်းခေါက်ရွေးယူလို့ရပါတယ်….။
အရည်အချင်းရှိရင်. ခေါင်းခေါက်ပြီး..မြန်မြန်လေးရွေးစေလိုပါကြောင်းနဲ့..ရွေးပြီးရင်.. တူတူနေကြည့်ပါ… အပျော်ဆုံးအချိန်တွေ ထပ်နေမှာဖြစ်ပါကြောင်း.. ။
( ရွာထဲက.. ပျိုပျိုမေ..ပျိုပျိုဖေ..တွေအကုန်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါကြောင်း…)
နန်းမြတ်ရေ အန်တီမနောတဲ့ လား..
ခေါ်ခံရတဲ့လူတော့ မသိဘူး ၊ ကြားက ဖတ်ရတဲ့လူတောင် နင်သွားတယ်..။
ဘဒူရေးရဲ ဟင် ? ခရေးရေးတေ ကဂျားနေဒယ်..ရူကြီး မရာရ…။
ငြမ်းငြတ် က ခရေးရား..ရူကြီးရား..ကျောပါ..။
ဟဲယို ဟဲယို ညမ်ညမ် ရွေး ရင်…ဟောဒီ ဂျစ်ဂျစ် ရေးကိုရဲ ရွေးကြည့်ပါ….
နာမည်လေးက ငြမ်းညတ် တဲ့လားကွယ်..
ဦးကြောင်ကြီးက ကြွက်သွားဖမ်းနေလို့ တဲ့…။
zippo ပဲ ကယ်တော့နော်….
အရမ်းကာရော ကို ဘာမှန်းမသိ စွတ်ကယ်ချင်နေတာ….။
သူတို့လေးတွေအဆင်ပြေနေကြတာ မင်းမသိ ဘူးလား
ဖြစ်မှာပဲ ဖြစ်မှာပဲ ငါ့ကိုလာမတားနဲ့×××ရို့၇ို့
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ဦနီကို အနောက်က သူ့မိန်းမက ကြီမ်လုံးနဲ့ ရိုက်လိုက်လို့ အားရို့..အားရို့..လို့ အော်သွားတာပါ။
ဟုတ်ဒယ် ဟုတ်ဒယ်…ဒါကျတော့ ဒိုင်းရှိုထားတာလား..ဟီး
လက်လုပ်လက်စားပါရှင်။ လက်လုပ်မှ ပါးစပ်လုပ်ရမယ့်ဘ၀ပါ။ တစ်လလုံးလုပ်မှ ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားနေရသူတစ်ဦးပါ။ မေးနေကြပုံထောက်တော့အလုပ်ပေးမလို့လားဟင်
တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရင်း ရှုံးနိမ့်နေသူတစ်ဦး။ said: >>>
၀င်းပြုံးမြင့်က စာရေးဆရာမတစ်ဦးရဲ့နာမည်ပါရှင်။ သူက ဂျာမန်ဘာသာပြန်တွေ ရေးတာ ပိုများပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးလုံးချင်းဝတ္ထုက ပီယမ်နိုကျူနာ ကို ဘာသာပြန်ကို အရင်ဆုံးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာပေစစ်ဆေးရေးတင်တော့ သူ့ရဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ စာအုပ်နာမည်ကိုကော ထုတ်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ပြင်သစ်စန္ဒယားဆရာတစ်ဦးက စော်ဘွားတွေဆီလာရောက်တဲ့အကြောင်းတွေဆိုတော့ ထုတ်ခွင့်မပြုလို့ သူ့ရဲ့မူရင်းနာမည်နဲ့ စာအုပ်ကိုလည်း ခေါင်းစဉ်က အစ ပြန်ပြောင်းပြီ ပြန်တင်မှ ထုတ်ဝေခွင့်ကျခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်အုပ်ကတော့ ဟစ်တလာ မီးရှို့တုန်းက ပါသွားတဲ့ ဂျာမန်ဘာသာပြန်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ ဘူဒင်ဘရွတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မီးရှို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှ ဒီစာအုပ်က နာမည်ရလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလို ပြန်ထုတ်တော့ မြန်မာနာမည်ကို မိသားစုတစ်စုရဲ့ ကျရှုံးခန်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသားထုတ်ဝေထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေလည်း ဂျာမန်ဘာသာကို မြန်မာဘာသာပြန်ပြောင်းထုတ်ဝေထားပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေ မနောမှာ မ၀ယ်နိုင်လို့ မရှိပေမယ့် ခုပြောတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ မနောဆီမှာ ဖတ်ချင်ရင် လာငှားလို့ရပါတယ်။
unclegyi1974 said: On January 29, 2011
အန်ကယ်ကြီးရေ ဗမာဆရာနဲ့ပြတော့ ဘယ်မှာပြရမှာလဲဟင်။ ဗမာဆေးမပြောနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆေးတောင်မသောက်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းကလည်း မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီ ခုကတော့ နည်းနည်းသက်သာနေတယ်။ ခုလို ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ မနောက အလုပ်ကော ပညာရေးကော လောဘက ခပ်ကြီးကြီးရယ်မို့……….
နာစိတ်တိုလာပြီနော်။ ၀င့်ပြုံးမြင့်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပါဆို။ (နောက်တာပါ)
အခုနောက်ဆုံးထုတ် “နေအသင်္ချေလအနန္တ“ ကမှ လွှတ်ကောင်းတာဗျ။ လက်က မချနိုင်ဘူး။ မိုးလင်းသွားတယ်။ ၀င့်ပြုံးမြင့်က စာရေးဆရာမလား။ ကျွန်တော့်မှာဖြင့် အရူးအမူးပါပဲ။ ငြိနေပြီ။ စာအုပ်ကိုပြောတာ။
သေသော် မှ သည်..သြော် ကောင်း၏…။…။
မ..က လွှတ်ပွါးတော့……………ကျွန်တော်..ဖတ်ရင်းနဲ့ ဂွမ်းသွားပြီ….။
အဲဒီတော့…သေသော်မှ သည် လွှတ်ကောင်း၏..။….။
I would like to apologize for u @ G talk. It is my info
Please see who I am
by Sithu Nyo
ကိုယ့်နာမည်- Sithu ayeko
ကိုယ့်ကိုသူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်ကြတယ်- Piper, Sithu nyo mae’ pyar net net tu ( it was by sarpati, when we r @ MTU)
ကိုယ့်မွေးရာသီခွင်က- ( Leo)
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ်- Singapore now ( lived at Mandalay for 22 years and YGN3years and pathein2years)
ကိုယ့်အကြိုက်တွေကတော့…Traveling around Asia countries
Dancing with Cha Cha ( when I am alone), Dancing Break Dance ( When i feel very happy @ room), Playing the Guitar (Vemp) and sing the Old heavy rock
အ၀တ်အစားဆိုရင်- Docker,Le Cupa,Levis
ဆံပင်ပုံစံနဲ့အရောင်- Deeply Black
စားစရာ- Meet noodle (when i m @ KL), (Chinese food @ Spore),( Mutton Prata @ Mumbai)
သောက်စရာ- Jack Denial, Baron,Espresso
ကိုယ်အ၀ယ်ဖြစ်ဆုံးအရာ- Books and album
ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးဂီတ- Heavy Rock
အခုလက်ရှိ အကြိုက်ဆုံးသီချင်း- Lu Chun Lu kaung ( current status only)
ပြည်ပအဆိုတော်- Lady Ga Ga, GNR,Stevie,Eminen, 50 Sent
တေးရေးဆရာ- Ko Htoo ein thin, Aw yatha,Thaw D wai,Lin Lin
စာရေးဆရာ- Thomas Flamene
စာအုပ်-The word is flat
ဂိမ်းကစားနည်း-No time for game until Feb 2011 ( not sure for after Feb 2011)
အရေးအကြီးဆုံးသူ- XXX ( but still no reply SMS n mail from her by 29 days and 8 hours)(GMT 6:30 @ 111:40 pm)
ကိုယ်အမုန်းဆုံးသူ- NO ( not the singers from Myanmar)
ကိုယ်အလေးစားဆုံးလူ- Bill Gate ( for Gate foundation only) and Daw Aung Sun Su Kyi
အပျော်ခဲ့ဆုံးနေ့- 8.8. 1988 ( just only next three months)
၀မ်းအနည်းခဲ့ဆုံးနေ့- The day failed the second year exam at MTU
ရင်အခုန်ခဲ့ဆုံးအချိန်- waiting the reply from first love
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ- Engineering Design + Guitar playing + Reading
ကိုယ်အဖြစ်ချင်ဆုံး ရည်မှန်းချက်- Senator ( selected from Real election, when i m over 40 years old)
ကိုယ်အခု မျှော်လင့်နေမိဆုံးအရာ- To sell the book from i-store
ကိုယ်သည်းမခံနိုင်ဆုံးလုပ်ရပ်- pretending and waste of time for nonsense people talking
ကိုယ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တာက- , Playing the Guitar , Writing (electrical CP)and sleeping
ကိုယ်လုံးဝမလုပ်နိုင်တာက- Myanmar font typing ( now) and kneeing
အားလပ်ချိန်သွားတတ်တဲ့နေရာ- Club ( when i m @ Spore), China town ( @ KL),Massage ( BK)
အားလပ်ချိန်မှာကိုယ်လုပ်လေ့ရှိတာက – planning for books and writing ,playing the Guitar
ကိုယ်အသွားချင်ဆုံး တစ်နေရာ- Eiffel tower (with the one i love)
အမုန်းဆိုတာ- I hate the hate
အလွမ်းဆိုတာ- painful feeling when loved one departed
ဘ၀ဆိုတာ- 30%- studying, 20% my family, 40% love (platonic),10% – planning for future
(A) Internet သုံးတယ်
(C) ရုပ်ရှင်/TV ကြည့်တယ်
အဖြေတွေက… (A), Playing Guitar, Reading the books,writing and …
မနောတော့ စမ်းပွင့်ကုန်ပြီ။ အပျိုကြီး ဂိုဏ်းထောင်တာ ပျက်တော့မယ်နဲ့ တူတယ်။
စန်း ပါနော်။ စမ်းရေ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတွေ ဖတ်ကြည့်တော့ IQ မှာရော၊ EQ မှာရော၊ မနောက ပိုမြင့်နေပါလား။ ဖြစ်သေးဘူး ဖြစ်သေးဘူး။
@ Ma Sue
I just looking for friends only. Anyway thanks for reading of my profile.
Yap. U r better than me in religion and web technology.
Now i am preparing the plan for Myanmar( fresh graduate, the Rector’s signature ink is not dry until now), to teach the electrical scope n M&E nature by FOC.
I can save n cover the Myanmar engineer in this way onlybattacking other nationality.
Some of the people waste not only numerous time but also time @ Gtalk n….
I hope u may understand me….
Let me say three times well done for your knowledge sharing